ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း YI 4K + Action Camera | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | အခြားကိရိယာများ, reviews
Androidsis တွင် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားနိုင်ခြင်းကံကောင်းသည် YI Technology မှစက်ပစ္စည်း။ ဤအချိန်တွင်ဓာတ်ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိရိယာရှိသည် YI 4K + လှုပ်ရှားမှုကင်မရာ။ အလွန်ကျေနပ်ဖွယ်ရလဒ်များကိုကမ်းလှမ်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ကင်မရာ
သင်အားကစားသို့မဟုတ်ရေအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းများတွင်သင်နှင့်အတူလိုက်ပါနိုင်သည့်ကင်မရာကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက YI 4K + သည်သင်၏မဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကကင်မရာတစ်ခု အားလုံးလေးဘက်အပေါ်စွန့်ပစ်အရည်အသွေး နှင့်မည်သည့်ပြိုင်ဘက်ထက်သာလွန်နိုင်စွမ်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်လည်းရင်ဆိုင်နေရပြီးယခုတွင်သင်သည် ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည် အမေဇုံအပေါ်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာ
1 YI 4K + မင်းရှာနေတဲ့ Action Camera
2 သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် Premium အသွင်အပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
3 YI 4K + Datasheet
4 box ကို contents တွေကို
YI 4K + မင်းရှာနေတဲ့ Action Camera
ဓာတ်ပုံလောကသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောပရိသတ်များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုစည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်လွှမ်းခြုံရန်ခက်ခဲသည်။ စမတ်ဖုန်းများရောက်ရှိလာချိန် မှစ၍ နိုင်ငံသားတိုင်းသည်ကင်မရာကိုသယ်ဆောင်လာကြသည်။ ပြီးတော့သူတို့အားလုံးဟာသူတို့ရဲ့အစွမ်းအစဒါမှမဟုတ်ကန့်သတ်ချက်အတွင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေပါ။
သို့သော်ဤအခြေအနေသည်လိုအပ်ချက်များကိုမဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါ အလွန်တိကျတဲ့ကဏ္ sector။ အခြားကင်မရာအမျိုးအစားတွေလိုတဲ့သူတွေရှိတယ်။ နှင့်သော်လည်း ကြမ်းတမ်းတဲ့စမတ်ဖုန်းများ ရှည်လျားသောလမ်း, ၎င်းတို့သည်လှုပ်ရှားမှုကင်မရာတစ်ခုကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အရာနှင့်မကိုက်ညီပါ။ အထူးသဖြင့်အရွယ်အစား၊ အလေးချိန်နှင့်တင်းကျပ်မှုတို့အတွက်ဖြစ်သည်။
YI ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကတ်တလောက်များတွင် Action Cams အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ သို့သော် 4K + သည်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုပြသသည်။ အများဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဒီဇိုင်း နှင့်အပြင်းထန်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်။ အမြင့်ဆုံး resolution နှင့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးဒါက YI 4K + ပါ။
သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် Premium အသွင်အပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
စျေးကွက်တွင်“ လှုပ်ရှားမှုကင်မရာများ” များစွာရှိသည်။ မရေမတွက်နိုင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ဗီဒီယိုများကိုရေအောက်တွင်ပင်ရိုက်ကူးနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ရန်ကင်မရာများကိုပေးသည် ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှာဖွေတဲ့အခါ "အစစ်အမှန်" ကင်မရာ ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်အခြေခံနှင့်စျေးပေါသောရွေးချယ်စရာများနှင့်အလှမ်းဝေးလှသည်။
ခြားနားချက်က အဆိုပါ YI 4K + နှင့်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်ကကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် ကိုကို ဝေးစျေးနှုန်းအောက် သည်အခြားရွေးချယ်စရာကုန်ကျစရိတ်ထက်။ ဒီနေရာမှာဒီကင်မရာဟာသူတတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုကျော်ပြီးထူးခြားမှုကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကင်မရာကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ YI 4K သည်၎င်း၏ယခင်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ နှင့်အတူ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာကိုတုပချောနှင့်အတူရှေ့ အသွင်အပြင်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အတိုင်းအတာအတိအကျတူညီဖြစ်ကြောင်းသိရကြမည် ယခင်ဗားရှင်းကနေဆက်စပ်ပစ္စည်းအားလုံးသဟဇာတဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း၏အစီအမံ 65 42 30 မီလီမီတာ, ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစား?
၎င်း၏ရှေ့တွင်ကျနော်တို့အပြင်ရှာပါ ပုံစံ "4k +" ၏အက္ခရာများ LED မီးသည်၎င်းပေါ်တွင်ရှိသလားသို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။
ငါတို့ကသူ့ကိုကြည့်ပါ ညာဘက်သေးငယ်တဲ့အဖုံးနောက်ကွယ်မှာ micro SD ကဒ်အထိုင်နှင့် ဘယ်ဘက် က မိုက်ခရိုဖုန်း။ ထဲမှာ နောက်ဘက် မင်းရဲ့ 2,2 "မျက်နှာပြင်စျေးကွက်ထဲမှာမြင်နိုင်တဲ့စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ခွဲခြားထားတယ်။ ရွေးချယ်စရာမျိုးစုံကိုရွေးချယ်ရန်ဖန်သားပြင်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ထဲမှာ အောက်ခြေ ငါတို့တွေ့ပြီ တစ် tripod နှင့်အတူအသုံးပြုရန်အတွက် adapter ဝက်အူ။ ၎င်းကို ဗဟိုပြု၍ မထားသော်လည်း၎င်းကိုတစ်ဖက်တွင်ထားသော်လည်း၎င်းသည်အလေးချိန်နိမ့်ခြင်းကြောင့်တည်ငြိမ်မှုပြproblemsနာများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထိုမင်း၌ရှိ၏ ထိပ်ဆုံးငါတို့ရှိသည် ပါဝါခလုတ်ကို, ၎င်းသည်မှတ်တမ်းတင်ရန်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်အတွက်ဖမ်းယူရန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဗီဒီယို mode တွင်ရှိသည့်ကင်မရာရှိလျှင်အသုံးပြုသည်။
YI 4K + Datasheet
ပုံစံ ၂၄ ကီလိုဂရမ်
sensor Sony က IMX377
resolution ကို 12 Mpx
မှန်ဘီလူး focal aperture 155 ဖြင့်2.8º
တည်ငြိမ်စေ 4k fps နှင့်အတူ 30k resolution အထိအီလက်ထရောနစ်
Processor ကို ambarella H2
ဖန်သားပြင် ၂.၂ လက်မထိတွေ့မှု
ဗီဒီယိုက 4k Fps မှာ 60K မှတ်တမ်းတင်
ဘက်ထရီ 1400 mAh ဘက်ထရီ
extras အသံထိန်းချုပ်မှု - ရေစိုခံအိမ်ရာ - ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှု
စြေး 322 €
ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် link ကိုဝယ်ယူရန် YI 4K + လှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
ဒီအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ YI 4K + လေးထောင့်ကွက်ထဲမှာငါတို့ရှာတွေ့နိုင်တာကို unbox ချပြီးကြည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ ပြီးတော့တစ် ဦး ၌တည်၏ ကုမ္ပဏီ၏ပုံမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့အလွန်သတိထားထုပ်ပိုး အတွင်းပိုင်းအဖြူနှင့်ကွက်လပ်၌ငါတို့သည်အချို့သောအံ့သြစရာရှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြည့်စုံလုံလောက်သောကာကွယ်ထားသောကင်မရာအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းရှိသည် ကြိုးတွေတရံ။ တစ်ခု အားသွင်းခြင်းနှင့်ဒေတာလွှဲပြောင်းသည်, သောငါတို့သည် format တစ်ခုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်တိုးတက်ကြောင်းကြည့်ဖို့အလွန်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည် USB အမျိုးအစား C။ နှင့် အခြား ငါတို့ကိုဘာကကူညီပေးမလဲ အပိုမိုက်ခရိုဖုန်းချိတ်ဆက်ရန် ဗွီဒီယိုရိုက်နေစဉ်။
အသစ်အဆန်းနှင့်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်မှာဤကင်မရာသည်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောပုံစံဖြင့်ဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ "ရေစိုခံ" ထည်ပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်အစကတည်းက ကျနော်တို့ကရေနေအပါအဝင်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်အန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ။ ထို့အပြင်၎င်းအတွက်အပိုပစ္စည်းများဝယ်စရာမလိုဘဲ။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအိမ်သည် offering ကင်မရာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျပြင်ဆင်ထားသည် IP68 ကာကွယ်မှု ငါတို့နှင့်အတူရေကန်၌သို့မဟုတ်ပင်လယ်၌တည်ငြိမ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူမကိုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျနော်တို့က 40 မီတာအနက်အထိနစ်မြုပ်နိုင်ပါတယ်…နောက်ဆုံးတစ်ခု!
ကျနော်တို့ပြီးသားရန်အသုံးပြုကြသည် YI နည်းပညာသည်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုတိုင်းတာသည် သင်၏စက်ကိရိယာများအားလုံးပေါ်တွင်။ နှင့်သင်တန်း၏ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း software ကို အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတတ်နိုင်သမျှကျေနပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အံ့အားသင့်စရာကတော့ YI 4K + ဟာခြွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။
El ကင်မရာမီနူးကိုကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် မည်သည့်ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုအသုံးအနှုန်းကိုအလိုလိုသိနိုင်မည်နည်း။ ငါတို့သုံးနိုင်တယ် ISO settings, white balance, အီလက်ထရောနစ်တည်ငြိမ်မှုကို select လုပ်ပါRAW format ဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။ အထူးဖော်ပြချက်သည်အလွန်ကောင်းသောရလဒ်များကိုပေးနိုင်သည့်အီလက်ထရောနစ်တည်ငြိမ်မှုကိုထိုက်သည်။
YI အရံပစ္စည်းများအားလုံးကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google application store ၌ရှိသည် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဖန်တီး App တစ်ခု။ ဤကိစ္စတွင် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်ကင်မရာဖြစ်ခြင်းသည် ပို၍ ပင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ပြီးတော့ဒါဟာ ၀ မ်းသာစရာပါ ကင်မရာမီနူးကိုသုံးပါ နှင့်အားလုံး setting များကို ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှ။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းစတင်ပါသို့မဟုတ်ရပ်တန့်, ထုတ်သည် ဓါတ်ပုံများနှင့်အကောင်းဆုံး သင်မှတ်တမ်းတင်နေသည့်အချိန်ကိုမြင်ကွင်းတွင်ကြည့်ပါ ကင်မရာ။
YI လှုပ်ရှားမှု - YI လှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
ရေးသားသူ: YI နည်းပညာ၊
ပြီးတော့ YI 4K ရဲ့ထူးခြားတဲ့အသွင်အပြင်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက် ငါတို့တကယ်ကြိုက်တဲ့အသံထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု၏ရိုးရှင်းသည်။ ပြီးတော့ကင်မရာ (သို့) မိုဘိုင်းကိုမထိစရာမလိုဘဲကင်မရာကို activate လုပ်ခြင်းသည်မည်မျှအသုံးဝင်သည်ကို ထောက်၍ ။ ၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့် "အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်" ကဏ္onတွင်ခဲယဉ်းသည်။
ဤသည်က၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူများကဖော်ပြသည်ပုံဖြစ်ပါသည် ... ပူပြင်းတဲ့အထည်။ သူတို့၏အနီးကပ်ဆုံးပြိုင်ဘက်များကမ်းလှမ်းသောအရာများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်း၏လုံခြုံမှုကိုသူတို့ကပြုလုပ်ကြသည်။ YI 4K + သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၀ အထိဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ တစ်ခုခုကျန် သာအကောင်းဆုံးရရှိနိုင် နှင့်စျေးကွက်ရှိအဆင့်မြင့်ကင်မရာများ။
ဤနေရာတွင် YI 4K + ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီးရေစိုခံအဖုံးပါရှိပြီး ၃၂၂ ယူရိုသာရှိသည်နီးပါးအထူးအထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူ ယူရို ၉၀ သည်၎င်း၏မူလစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက.
အ ရေအောက်ဗီဒီယိုများ သူတို့ကအများဆုံးအာရုံကိုဆွဲဆောင်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်မှုအချို့လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီးရလဒ်ကယ့်ကိုကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့တကယ်ကြိုက်တယ် အရောင်များ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု နှင့်ကင်မရာနစ်မြုပ်နှင့်အတူပင်ကမ်းလှမ်းအဓိပ္ပါယ်။
ဤသည်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နေသည့် YI 4K + Action Camera ဖြစ်သည်။
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို Androidsis ပါ အပေါ် @androidsisweb စက်တင်ဘာ 23, 2018 မှာ 12: 59pm PDT ရန်ကုန်
ဓာတ်ပုံများလည်းယူ အရည်အသွေးနှင့်အလွန်ကောင်းသော resolution ကိုပြသnoted, မှတ်သားခံရအပြင်, ကောင်းဘို့, အ ကျယ်ပြန့်ထောင့် ဒါကဓာတ်ပုံတွေဟာသမားရိုးကျကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးတဲ့အခာတွေထက်ပိုပြီးနေရာယူစေတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ရက်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးပြီးနောက်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများရိုက်ကူးခြင်း YI 4K + သည်စျေးကွက်ကမ်းလှမ်းသောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး / စျေးနှုန်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် ဒီကဏ္sectorတွင်ယနေ့။ ငါတို့စမ်းသပ်နိုင်သောဤထုတ်လုပ်သူထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်ကျန်ပစ္စည်းများမှအရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများနှင့်ချောဆေးများကိုပေးသည်။
La ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်အရည်အသွေး အဲဒါဟာသူ့ရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ ထွင်း 4K ဗီဒီယိုများ 60 fps မှာ ကအနည်းငယ်၏လက်လှမ်းမမီအတွင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့လေးစားတာကိုကြိုက်တယ် ၎င်း၏ယခင်မှလေးစားမှုနှင့်အတူတန်းတူအစီအမံ, ထို့ကြောင့်အားလုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းသဟဇာတဖြစ်ကြသည်။
El Voice ကိုထိန်းချုပ်ရေး ၎င်းသည်၎င်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါင်းတစ်ခုပေးသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားမတူညီသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
La ကင်မရာမျက်နှာပြင်နှင့်စစ်ဆင်ရေး၏လွယ်ကူခြင်း ရိုးရှင်းသော၊ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောနှင့်အလွန်တိကျသောထိန်းချုပ်မှုများရှိသောကင်မရာ၏။
La မိုဘိုင်းနှင့်အတူအသုံးပြုရန်လျှောက်လွှာ ၎င်းသည်အလွန်အောင်မြင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တည်ငြိမ်သော Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကြောင့်ကင်မရာကိုထိစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်စရာများအားလုံးရုပ်ရှင်ပင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
YI 4K + ၏အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် သူ၏ဘက်ထရီ။ သူတို့ရဲ့ 1400 mAh ဘက်ထရီ ရှည်လျားသောကမ်းခြေရှိဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်သူတို့မလုံလောက်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့စျေးနှုန်း, ကျော်ကြား GoPro အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတောင်မှဖြစ်ခြင်း, အထူးသဖြင့်ယခင်မော်ဒယ်၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူအတော်လေးမြင့်မားတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
La မျက်နှာပြင်ကျန်ခဲ့တယ် brill ၏တစ်ခုခုပါပဲနေရောင်အပြည့်ရှိချိန်ညှိချက်များသို့မဟုတ်ဖမ်းယူမှုများကိုကြည့်ဖို့ခက်ခဲသည်။
YI 4K + လှုပ်ရှားမှုကင်မရာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » YI 4K + Action ကင်မရာကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ